I-BEE: Yakha Futhi Ulande I-imeyili Yakho Ephendulayo Yeselula Ku-inthanethi Mahhala | Martech Zone
NgoMsombuluko, Mashi 8, 2021 NgoLwesithathu, Februwari 9, 2022 Douglas Karr
Ama-imeyili angaphezu kwama-60% avulwa kuselula ngokuvumelana ne Ukuxhumana okuqhubekayo. Kuyamangaza ukuthi ezinye izinkampani zisalwa nokwakha ama-imeyili aphendulayo. Kunezinselelo ezi-3 nge-imeyili ephendulayo:
Umhlinzeki Wensizakalo ye-imeyili - Abahlinzeki abaningi be-imeyili abanakho ukuhudula futhi baphonse amakhono wokwakha ama-imeyili, ngakho-ke kudinga ithoni yentuthuko engxenyeni ye-ejensi yakho noma yethimba lokuthuthukisa langaphakathi ukwakha lezo zifanekiso.
Ama-imeyili Amaklayenti - Akuwona wonke amaklayenti e-imeyili afanayo futhi iningi lawo linikeza ama-imeyili ahlukile kwamanye. Njengomphumela, ukuhlola kuwo wonke amaklayenti we-imeyili namadivayisi kuyimboni ngaphakathi kwayo.
Development - Uma wazi i-HTML ne-CSS, ungakha ikhasi lewebhu eliphendula kamnandi kalula ... kepha ukwakha ngaphandle kwawo wonke amaklayenti we-imeyili kungaba yiphupho elibi ngempela. Kudinga ukusebenza nabathuthukisi abakhulu, noma ukusebenza ngezifanekiso ezivivinywe kakhulu neziguquliwe.
Manje kunezindawo eziningi online lapho ungathola futhi ulande izifanekiso zamahhala ze-imeyili eziphendula ngokuphelele. Uma umuhle entuthukweni, ngokujwayelekile ungashintsha izakhi bese uzakhela i-imeyili enhle kakhulu. Ukuhlela ikhodi eluhlaza ngemuva kwe-imeyili namanje akumnandi, kepha… khohlwa isitayela noma isigaba futhi i-imeyili yakho izobukeka imbi.
Kade ngifuna ukulungisa lencwadi Martech Zone okwesikhashana manje futhi empeleni sinesevisi yethu ye-imeyili esebenza kuseva yethu ebiza amasenti kudola uma kuqhathaniswa nabanye abahlinzeki. Ngababhalisile abangaphezu kwama-30,000, angikwazi nje ukufakazela izindleko zabahlinzeki abaningi bezinsizakalo ze-imeyili ngakho sizakhele ezethu!
Umakhi we-imeyili ophendulayo we-BEE
Ngenkathi ngibuyekeza ezinye izifanekiso ezizungeze iwebhu engizithandile, kwenzeke ngaphesheya kwe-BEE, inkampani esungule amathuluzi ambalwa amahle:
I-plugin ye-BEE - isihleli sekhasi le-imeyili elishumeka ngokuphelele lezinkampani ze-SaaS ukufaka ezisekelweni zazo.
I-BEE Pro - ukuhamba komsebenzi wokuklama kwe-imeyili kwabaqambi be-imeyili abaqeqeshiwe ukuze basebenzisane futhi bathuthuke.
BHALA - umakhi wamahhala we-imeyili ophendulayo ongashesha lapho ungathuthukisa izifanekiso kusuka ekuqaleni noma ukungenisa noma imuphi kumakhulu ezifanekiso zamahhala ze-imeyili eziphendulayo.
Bheka i-imeyili ye-BEE ne-Landing Page Builder
Kungakapheli ihora, ngase ngikwazi ukwakha i-imeyili yami, ngayihlelela amadivayisi eselula, ngazithumela isivivinyo, futhi ngalanda ikhodi… konke mahhala!
Okokuqala, ngikhethe isifanekiso esingenalutho ngabe sengakha izigaba ebengizifuna futhi ngisebenzisa izithombe zokubamba. Ngizobhala lokhu ku Martech ZoneIthempulethi kanye lapho ngilifuna ngqo.
Ngabe ngibheka kuqala i-imeyili yedeskithophu futhi ngenza ezinye izinguquko ezincane zokubeka isikhala nokufaka izikhala.
Ngibuke kuqala kuselula futhi ngenza ezinye izinguquko ezingeziwe. Umhleli unikeza ithuba lokufihla izinto zedeskithophu noma ezeselula, ukuze ukwazi ukwenza ngokwezifiso isipiliyoni seselula kahle.
Ngibe sengizithumela i-imeyili ngqo kusuka kuMhleli we-BEE:
Umhleli futhi ukunika amandla okuba nezizinda ezisobala ezibukeka zizinhle uma usebenzisa Imodi emnyama ku-imeyili yakho iklayenti.
Lapho konke sekuphelelise, ngakwazi ukulanda ifayili le-HTML eligcwele kanye nanoma yiziphi izithombe zenhlalo ezifakiwe ne-interface yazo. Banokukhethwa kukho okuningana kuleli phuzu, noma kunjalo, uma ubhalisela i-akhawunti ekhokhelwe ye-BEE Pro.
BEE ubheke iphephandaba elibuyekeziwe kusuka ku- Martech Zone!
Qala Ukwakha I-imeyili Yakho Ephendulayo nge-BEE
Tags: bee umhleli imeyilibee plugininyosi proumhleli we-imeyiliumhleli we-imeyili wamahhalaumhleli we-imeyili onlineumhleli we-imeyili ophendulayo